Bit By Bit - Ịmepụta mmekọrịta ọnụ - 5.2 Human mgbakọ
Usoro oru nhazi nke mmadu bu nnukwu nsogbu, kpochapu ya, kpoo ha otutu ndi oru, ma chhikota ya.
Ihe omuma nke mmadu jikota onu ogugu nke otutu ndi mmadu na-aru oru na obere microtasks iji dozie nsogbu ndi buru ibu maka otu onye. Ị nwere ike ịnweta nsogbu nyocha nke kwesịrị ekwesị maka nyocha mmadụ ma ọ bụrụ na ị chetụla: "M nwere ike idozi nsogbu a ma ọ bụrụ na m nwere puku ndị inyeaka nyocha."
Ihe omuma atu nke ihe omuma nke mmadu bu Zoo Zoo. N'ime oru ngo a, ihe karịrị otu puku ndị ọrụ afọ ofufo dị iche iche na-ese onyinyo ihe dị ka nde ụyọkọ kpakpando ndị nwere ezi ihe yiri nke ahụ n'oge gara aga-na obere mgbalị ndị ọkachamara na-enyocha mbara igwe na-eme. Ọganihu a dị elu site na nchịkọta ọnụ na-eduga n'ọhụụ ọhụrụ banyere otú ụyọkọ kpakpando si etolite, o wee ghọọ òtù ọhụrụ nke ụyọkọ kpakpando a na-akpọ "Green Peas."
Ọ bụ ezie na Zoo Zoo nwere ike iyi ihe dị anya site na nyocha ndị mmadụ, enwere ọtụtụ ọnọdụ ebe ndị na-eme nchọpụta na-achọ ịchọta, dozie, ma ọ bụ kpọọ ihe oyiyi ma ọ bụ ederede. N'ọnọdụ ụfọdụ, kọmputa nwere ike ime nke a, ma a ka nwere ụfọdụ ụdị nyocha nke siri ike maka kọmputa ma dị mfe maka ndị mmadụ. Ọ bụ ndị a dị mfe ma na-kọmputa microtasks na anyị nwere ike na-atụgharị na ọrụ mmadụ nhazi.
Ọ bụghị nanị na microtask dị na Zoo Zoo n'ozuzu ya, mana ọdịdị nke ọrụ ahụ n'ozuzu ya. Ogige Zoo, na ọrụ ndị ọzọ na-atụle mmadụ, na-eji usoro atụmatụ-arụkọ ọrụ ọnụ (Wickham 2011) , mgbe ị ghọtara usoro a ị ga-enwe ike iji ya dozie ọtụtụ nsogbu. Nke mbụ, a na- agbagha nsogbu buru ibu na ọtụtụ obere nsogbu. Mgbe ahụ, a na- etinye ọrụ mmadụ n'ọrụ na obere nsogbu nsogbu ọ bụla, na-enweghị onwe ya na ndị ọzọ. N'ikpeazụ, a na- ejikọta ihe arụ nke ọrụ a iji mepụta ngwakọta nkwenye. N'inye nzụlite ahụ, ka anyị hụ otú e si jiri atụmatụ ịmekọrịta ọnụ-na-etinye ọnụ na Galaxy Zoo.